आयल निगममा भएको भनिएको भ्रष्ट्राचार कसले छानविन गर्ने ? – NEWS24 TV – Nepali Live – Videos & Entertainment नेपाली लाइभ
आयल निगममा भएको भनिएको भ्रष्ट्राचार कसले छानविन गर्ने ? – NEWS24 TV
केही दिन अघि दरबारमार्गमा २६ सय प्रतिशत बढि सम्म नाफा राखेर ग्राहक ठगीरहेको बान्डेड नामका सोरुमहरु सिल गरेपछि एकाएक चर्चामा आए आर्पुीत मन्त्री शिव कुमार मण्डल । यो सँगै दरबारमार्गका धेरै पसल अहिले यसको बिरोध गर्दै पसल बन्द गरेर मन्त्रीको अनुगमनको विरोध गरिरहेका छन् भने धेरैले महंगो शुल्क हटाई वास्तविक शुल्कमा सामानहरु वेचिरहेका छन् । बान्डको नाममा ठगी गर्ने पसलेहरुलाई सिल गरेर चर्चामा आएक यि मन्त्रीले जग्गा खरिद प्रकरणमा आयल निगमले करोडौ रुपयां घोटाला भएको विषयमा मुख खोलेका छैन्न । यस अघि भने मन्त्री मण्डलले आयल निगमले पेट्रोलिय पदार्थ भण्डारनका लािग सबै प्रदेशमा खरीद गरेको जग्गामा भएको घोटालको बिषयमा छानबिन गरी कारवाही गर्ने बताउँदै आएका थिए ।